Ny vidin'ny trano anatiny - Architect interior designer Bucharest - trano fandraisam-bahiny trano Constanta - Nobili Interior design, studio, architect, designer, firms, design, prices
Taratasy fananganana atrikasa anatiny
Ny tetikasa fanorenana anatiny dia ny famoronana endri-javatra manokana, miavaka ho an'ny mpanjifa tsirairay, ka raha tsy hita ao amin'ny iray amin'ireo endrika noforonina ao amin'ny portfolio dia satria tsy mitovy ianao, ny olona tsirairay dia miavaka amin'ny fomba samihafa Ny tetikasam-pananganana manokana noforoninay ho anao dia hampiseho anao amin'ny fomba feno ny fomba fiainanao sy ny toetranao.
Ny dingana voalohany - niantso anay na mandefa hafatra planina trano izay te-manaova fotoana mba handray ny tolotra amin'ny fotoana fohy indrindra ny manam-pahaizana manokana ho anao dia mifandray kokoa tsipiriany momba ary mety hametraka ny fivoriana.
Ny tolotra vidin'ny tetikasa 3D dia noforonina ary napetraka mifanaraka amin'ny endriky ny endrika sy ny endrika noforonina. Tamin'ny fivoriana voalohany Hodinihintsika amin'ny an-tsipiriany ny raharaha momba ny toerana tsirairay efitrano, dia hamantatra ny fomba ny fiaraha-monina misy ao ary rehefa afaka ny fifanarahana no hitsidika ny toerana tokony hisian'ny fanamarinana lafiny voalohany sketches sy manatona vaovao firaketana an-tsoratra dia raha fiovana ho amin'ny subdivision.
Ny famoronana sy ny firafitry ny famolavolana tetikasa dia mitaky asa mafy ora maro ny asa, ny fianarana avy amin'ny katalaogy maro izay mifidy ny tsara indrindra vokatra mety fomba tsy ny kely indrindra, ary ny teti-bola tsara ho an'ny mpanjifa ny vokatra izay incadrandu- azy ireo amin'ny famolavolana tetikasa avy eo dia manome ny mpanjifa mba hahatonga ny vokatra ho mitovy tanteraka amin'izay nisy ravaka ao anatiny 3D tetikasa.
Manolotra ny mpanjifantsika amin'ny fanohanana ilaina isika mba hampihatra ny tetikasa fanorenana mba hahafahan'izy ireo misafidy ho an'ny iray amin'ireo fonosam-panompoana telo izay noforonina araka ny filany.
Nobili Pro TSARA HO FANTATRA ANJELY (3D hevitra manokana, sarintany tetikasa, fanatitra ara-nofo)
- Trano, trano fonenana maoderina 14-19 euro / sqm, arakaraka ny habaka sy ny karazana fanangonana.
- Trano, trano fananana malaza 16-22 euro / sq m, arakaraka ny faritra sy ny karazana fizarazarana.
- Appartements, studios prix 20-30 euro / cm depuis de la surface et des styles choisirées.
Planning sy ny habaka Optimization, 3D famolavolana, fanaka famolavolana, photorealistic sary, sarintany famolavolana (sketches 2D amin'ny herinaratra sy ny fahadiovana fametrahana, sary 3D amin'ny fanaka creat- ambaratonga sary noforonina tafo, repartitioning, sns Ny saran'ny ny fitaovana ireo - dia nampiasaina tao anatin'ilay tetikasa, fitaovana omentsika mivantana).
FANAZAVANA FANAMPINY PREMIUM INTERIOR (KEY) - vidiny On request
Planning sy ny habaka Optimization, 3D famolavolana, fanaka famolavolana, photorealistic sary, sarintany famolavolana (sketches 2D amin'ny herinaratra sy ny fahadiovana fametrahana, sary 3D amin'ny fanaka creat- ambaratonga sary noforonina tafo, repartitioning, sns Ofeta vidin'ny fitaovana anao - dia nampiasaina tao anatin'ilay tetikasa, fitaovana omentsika mivantana).
Fitantanana ny tetikasa misy:
-Mba fifanarahana ny trano sy ny atitany raha misy efa mafy ny famolavolana hanolo-tena hanampy sy ny fandrindrana ny asa an-toerana (drafitra dingana miasa, fanamarinana sy fanaraha-maso ny asa, mba hitsena ny tetikasa famolavolana).
-Mba fifanarahana mpanamboatra fanaka fanao (fanaraha-maso sy ny fanaka famokarana fanamarinana mba hanaraka ny famoronana sy ny foto-kevitra ara-teknika angon-drakitra taratasy famolavolana ny volavolan fanaka).
- Famoahana ny fanangonana fanangonana ao Italy, ny fijerena ny fandefasana sy fametrahana ny entana novidiana.
- Fanaterana sy fametrahana ireo fitaovana rehetra tafiditra amin'ilay tetikasa.
Mba hahafahantsika mamaly ny fangatahan'ny mpanjifantsika avy amin'ny tanàna hafa ao amin'ny firenena sy any ivelany, dia namorona isika:
- vidin'ny 14-19 euro / sqm ho an'ny trano, trano maoderina.
- 16-22 euro vidin'ny vidin-trano malaza.
- vidin'ny 22-35 euro / sqm ho an'ny trano fonenana, fianarana.
izay midika hoe:
- Mampiasà sary manjavozavo sy sary avy ao anatiny mankany amin'ny adiresy mailaka voalaza ao amin'ilay tranonkala.
Paminaniana vao mahazo vidiny ianao dia ho nifandray amin'ny mpanoro hevitra, izay no manazava ny fomba mihazakazaka ny fanompoana.
-After fanekena ny vidin'ny tolotra dia hahazo ny tabilao manokana izay tsy maintsy hameno sy mandefa izany amin'ny alalan'ny taratasy. Ity tahirin-kevitra mangataka fanazavana momba ny toerana efitrano tsirairay, indrindra fa nandravaka fomba sy ny maro hafa ny tsipiriany, izay hanampy antsika hanao ny mari tsara izay tianao.
Nivoha mamorona ny toerana in 3D (nobeazin'ny) ary dia sary 3D mandefa hafatra ho anao hamantatra sy manaiky fisarahana, dia ny fandaharana dia hiasa ao 3D toerana. Mandritra izany fotoana izany dia mifandray amin'ny alalan'ny finday sy ny namany Sary ary hiasa akaiky sy mba hahazoana vokatra tsara indrindra.
-When tetikasa vonona, ianao raisintsika any amin'ny namany Sary voalohany dingana 3D sary, ary avy eo, rehefa avy nanaiky ny fonosana amin'ny iraka mba handray tetikasa lahatahiry izay ahitana ny fanazavana ilaina ny fampiharana ny tetikasa (sketches 2D amin'ny herinaratra sy ny fahadiovana fametrahana, sary 3D amin'ny fanaka creat- ambaratonga sary noforonina tafo, repartitioning, sns ofeta saran'ny ny fitaovana fa ampiasaina ao amin'ny tetikasa fitaovana izay atolotrareo mivantana). Ny fiovana rehetra mety tianao hampidirina amin'ny tetikasa natolotrareo dia tsy mitaky vola hafa. Tsy mifandray ary Ho hanampy ho fampiharana ny tetikasa famolavolana ka ny vokany dia ho mitovy tanteraka ny tetikasa 3D noho ny vonona hanohana orinasa fampandrosoana izay miasa sy amin'ny alalan'ny fanomezana ny fitaovana ianao ampiasaina ao amin'ny tetikasa 3D. Na inona na inona karazana tetikasa anaty endrika misafidy (an-trano, Villa, trano, trano fandraisam-bahiny, toeram-pisakafoanana, toeram, tsena, toeram-pitsaboana ara-pahasalamana, hatsaran-tarehy Salon mpanao volo) dia hifindra ho any amin'ny toerana misy anao amin'ny tsy misy vola fanampiny ho an'ny tolotra atolotra ny foto-kevitra ny trano anatiny 3d. Ho famaranana, raha Hianao no ao Cluj Napoca, Timisoara, Oradea, Arad, Sibiu sy Hunedoara dia handoa ny iray ihany izany noho ny famolavolana tetikasa toy ny mpanjifa ao Bucarest, Constanta, Giurgiu, Calarasi, Galati, Tulcea, Craiova, Brasov sy Prahova . Fifandraisana an-tariby: 0720.665.365
Services orinasa endrika anatiny, mpanao mari-trano fandikan 3d, atitany, trano mahazatra, maoderina, vidin-javatra avy 17 euro metatra (vidin'ny tolotra farany ho an'ny tetikasa endrika anatiny dia kajy araka ny isan'ny nanorina metatra toradroa, no. Ny efi-trano , ny fomba nofinidy sy ny fahasarotan'ny tetikasa eo ampiharana) ao Constanta, Bucarest, Ploiesti, Brasov, Pitesti, Galati.
Category lahatsoratra service endrika anatiny, endrika anatiny, orinasa, birao, trano, mahazatra, maoderina, trano rantsan-kazo mahazatra endrika anatiny vidin'ny, trano fisakafoanana, trano fisotroana, trano fisotroana kafe, trano fandraisam-bahiny, tranom-bahiny, toeram-pivarotana, mendri-kaja anatiny famolavolana tolotra, famolavolana, maritrano 3d , bucuresti, constanta, brasov, pitesti, ploiesti, galati, cluj, timisoara, architect, trano famoronana, architects maharitra, mpanao mari-trano ny vidiny mitohy.
Ny vidin'ny trano anatiny - Architect interior designer Bucharest - trano fanorenana trano Constanta
Mba hahazoana antoka ny fahombiazan'ny tetikasa fanorenana anatiny dia azo antoka ny fiantsoana ny orinasam-pandraharahana ao anatiny. Ny endriky ny endrika ivelany dia samy hafa ary misy singa maromaro, ary ny mpanjifa tsirairay dia maniry ny hametraka ny marika amin'ny fanavaozana na famolavolana ny tranony, trano na trano. Ary Noble Atitany Design no tonga lafatra safidy ho an'ny famolavolana tetikasa mikendry ara-barotra (trano fisakafoanana, bar, trano fandraisam-bahiny, fivarotana akanjo, hanao volo Salon, toeram-pitsaboana ara-pitsaboana) na Rezindential (trano, trano). Amin'ny maha mpitarika tsena satria 2008 sy ny 250 famolavolana tetikasa ny Atitany trano sy ampiharina lehibe tao an-tanàn-dehibe any Romania sy Bucharest, Constanta, Brasov, Ploiesti, Craiova, Giurgiu, Galati, Braila, Tulcea, Calarasi, Bacau, Suceava , Focsani, Vaslui, mendri-kaja anatiny endrika manan-danja manolotra vahaolana ho an'ny rehetra sy ny fametrahana tetikasa famolavolana anatiny manam-paharoa. Ny toerana rehetra ao an-trano na ny trano tianao hapetraka dia tsy maintsy mampiditra ny singa manana ny endriky ny endrika afovoany noforonina ary maneho ny safidinao ho an'ny architecture sy ny trano anatiny. Ny fomba fanorenana malaza any ivelany, dia mila chromatika misokatra, trano hazo vita amin'ny hazo vita avy any Italie, kitay hazo vita amin'ny laminasa ary ny fitaovana sy ny endrika nofantenana avy amin'ireo mpamokatra sy mpamatsy Eoropeana ambony. Ny fantsom-panoheram-barotra toy ny kandelier na karajia miloko sy tsipiriany hafa dia mitondra mankany amin'ny loha-laharana ny fanatsarana ny fomba fanorenana malaza. Ny kalitaon'ny fambolena dia hiantoka ny faharetan'ny fitaovana ampiasaina amin'ity karazana amboaram-bary sy endrika anatiny ity. Mazava ho azy, ny safidy tsirairay dia mifototra amin'ny fahafaha-manao ara-bola sy ny tsiron'ny mpanjifa. Ankoatra ny architects sy ny mpanakanto ao amin'ny Nobili Interior Design, ny mpanjifa dia afaka hijery ny tetikasa fanorenana anatiny ao 3D alohan'ny hametrahana azy. Raha vantany vao nomena ny jiro maitso, dia hanomboka ity tetikasa fanorenana ity ny manam-pahaizana, ary hifanaraka amin'ny mpanjifa manontany mandritra ny tetikasa. Ny architects ao amin'ny trano famolavolan'ny ati-trano sy ny ati-trano dia hifantoka amin'ny famoahana toerana malalaka kokoa, na te-hanangana trano, trano, hotely, trano fisakafoanana, trano fivarotana na salon. Nobili Interior Design dia ekipa manan-talenta izay manana sampan-draharaha miavaka manokana ary mahatalanjona anao ny vokatra farany. Alefaso amin'ny mailaka (nobilidesign [@] gmail.com) andian-tsarinao 2d ary teny vitsivitsy momba ny fomba hanehoana ny tranonao na ny orinasa. Tombatombana ny vidin'ny serivisy fandrafetana ny trano fandraisam-bahiny: trano fanorenana trano fanorenana trano tsotra 16-22 euro sq ft tsy misy VAT. Ny trano fanorenana trano maoderina dia mampiakatra ny vidin'ny vidin'ny 15 ka hatramin'ny 19 euro sq ft tsy misy VAT. Ny vidin'ny sehatry ny varotra trano anatiny 14 - 25 euro sq. Tsy misy tva. Ny vidin'ny drafitrasa anatiny iray hafa dia samy hafa araka ny fomba nofidiana, ny fizarana ary ny isan'ny efitrano, ny fahasarotana ary ny fepetra takian'ny tetikasa. Mifandraisa amin'ny designer designer interior designer Gabriela Nechifor.
Fiantohana momba ny fanadiovana anatiny Nobili Interior Design
Ny endrika anatiny miankina amin'ny zavatra ilain'ny mpanjifa sy ny mpanao maritrano fahitana manam-pahaizana manokana. Noho ny ekipa ny manam-pahaizana manokana ahitana mpanao mari-trano, anaty mpamorona, ivelany, endrika fanaka miorina ao ambadiky ny tetikasa tsirairay dia handray ny torohevitra sy ny vahaolana tsara indrindra ho an'ny ny anatiny endrika ny trano, trano na Villa, na inona na inona an-tanàna izay itoeranareo. Prices 3D atitany manomboka amin'ny famolavolana tetikasa 17 euro / sqm, miovaova arakaraka ny faritra ny efi-trano, isan'ny efitra ho nanangana ary mazava ho azy ny famolavolana safidy anatiny. Ny endriky ny planina tsirairay dia mitaky fiaraha-miasa, fiaraha-miasa ary toro-hevitra avy amin'ireo manam-pahaizana eny an-tsaha.